Talooyinka Muuqaalka Iibka ee Xafiiska Gudaha | Martech Zone
Khamiis, Maarso 26, 2020 Talaado, Maarso 2, 2021 Douglas Karr
Dhibaatada hadda jirta, xirfadleyda ganacsiyada waxay helayaan naftooda go'doon iyo ka shaqeynta guriga, iyagoo ku tiirsan istiraatiijiyadda fiidiyowga ee shirarka, wicitaanada iibka, iyo shirarka kooxda.
Hadda waxaan go'doominayaa naftayda usbuuca soo socda tan iyo markii saaxiibkey uu ku dhacay qof ka baaray cudurka 'COVID-19', sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan soo uruuriyo talooyin kaa caawinaya inaad si fiican uga faa'iideysato fiidiyowga inuu yahay dhexdhexaadiyahaaga.
Tilmaamaha Fiidiyowga ee Home Office
Hubin la'aanta dhaqaalaha, waa inaad u naxariisataa caqabadaha rajo kasta iyo macaamiil. Waa inaad noqotaa ilo lagu kalsoonaan karo oo caawimaad u leh rajo iyo macmiil kasta. Istaraatijiyadaha muddada-dheer ayaa inta badan la iska indhatiraa iyadoo shirkaduhu hoos u foorarsadaan oo ay si xeeladeysan u fikiraan. Fiidiyowgu waa qaab si looga adkaado qaar ka mid ah caqabadaha masaafada ee aan la leenahay xiriirka aadanaha, laakiin waa inaad sidoo kale wax ka baddashaa waayo-aragnimadaas.
Fiidiyow ahaan, waxaad ubaahantahay maskax, saadka, istiraatiijiyadda fariinta, iyo aaladaha si loo kordhiyo kaqeybgalka iyo saameynta fariintaada.
Go'doon, culeys, iyo hubin la'aan ayaa saameyn ku yeelan kara sida naloo arko. Waa kuwan waxyaabo aad sameyn kartid si aad u hagaajisid maskaxdaada shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale sida ay kuu arkaan qofka daawada.
Mahadnaqay - Kahor intaadan fidiyo fiidiyowga, ka fikir waxa aad mahadsantahay.
Jimicsiga - Annagu inta badan ma dhaqaaqno. Samee jimicsi si aad madaxaaga u nadiifisid, oo aad uga saartid culeyska fekerka, oo aad u sameysid endorfin.
Dhar for Success –Waxaa la joogaa wakhtigii la qubeysan lahaa, la xiiri lahaa, lana lebisan lahaa guusha. Waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento kalsooni badan qofka aad heysatana wuxuu heli doonaa aragti weyn sidoo kale.
Muuqaal - Ha istaagin derbi cad hortiisa. Xafiis leh midabyo qoto dheer oo dhul ah oo gadaashaada ah ayaa si aad ah uga casuuma laydh diiran.
Home Office Saadka Saadka
Yaree arrimaha kasta oo aad lahaan doonto tayada maqalka, tayada fiidiyowga, carqaladeynta, iyo arrimaha isku xirnaanta. Baadhid xafiiska guriga si aan u arko waxa aan maal galiyay iyo sida ay wax u wada shaqeeyaan.
Hardwire - Ha ku tiirsaneyn Wifi fiidiyowga iyo maqalka, kaabi xarig ku meel gaar ah router-kaaga illaa laptop-kaaga.
qodobbadani - Ha u adeegsan kuwa ku hadla dibedda si aad u dhageysato, isticmaal dhegaha. ÜAudio - Codka waa furaha, hel makarafoon weyn ama isticmaal makarafoonkaaga si loo yareeyo buuqa gadaashiisa.
Neefso & Kala bixi - Adeegso neefsashada diaphragmatic ka hor fiidiyowgaaga si aadan ugu gaajaysan oksijiin. Kala bixi madaxaaga iyo luqunta intaadan bilaabin.
Eye Contact - Ku dheji kaameraddaada heer indhaha ama ka sarreeya oo fiiri kamaradda oo dhan.
carqaladayn - Dami ogeysiisyada taleefankaaga iyo miiskaaga.
Istaraatijiyadaha Xiriirka Fiidiyowga Ganacsiga
Fiidiyowgu waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad uga faa'iideysato xooggiisa si aad u yeelato saameynta ugu badan.
Maqal- Waqtiga dadka ha iska lumin. Ku celceli waxa aad dhihi doonto oo si toos ah u abaari barta.
Faham - Adigoon ogeyn xaaladda shaqsiyeed ee daawadahaaga, waxaa laga yaabaa inaad ka fogaato kaftanka.
Wadaag Kheyraadka - wixii macluumaad dheeri ah halka daawadahaagu si qoto dheer isu baari karo.
Sii Gargaar - Waxaad fursad u siisaa rajadaada ama macmiilkaagu inuu dabagal ku sameeyo. Tani maahan iib!
Noocyada barnaamijyada fiidiyowga
Shabakadaha Webinar, Shirka iyo Kulannada - Zoom, Uberconference, iyo Google Hangouts dhammaantood waa softiweerro shirar weyn oo loogu talagalay 1: 1 ama 1: Kulamo badan. Sidoo kale waa la duubi karaa loona dallaarin karaa dhagaystayaal ballaaran.
Barnaamjiyada Tooska ah ee Warbaahinta Bulshada - Facebook iyo Youtube Live waa aalado fiidiyoow bulsheed oo cajaa'ib leh oo lala wadaagi karo dhagaystayaal badan.
Iibinta & Email Platform-yada Muuqaalka - Loom, Dubb, BombBomb, Covideo, OneMob awood kuu siinaya inaad horay ugu duubato shaashaddaada iyo kamaraddaada. Ku soo dir animations-ka emaylka, digniin, oo ku dar CRM-gaaga.
Marti gelinta fiidiyowga - Youtube weli waa mishiinka raadinta labaad ee ugu weyn! Halkaas dhig oo ku hagaaji. Vimeo, Wistia, iyo barnaamijyada kale ee ganacsiga ayaa sidoo kale aad ufiican.
Warbaahinta bulshada - LinkedIn, Twitter, Instagram dhammaantood waxay kuu oggolaanayaan inaad ka faa'iideysato dhammaan kanaalladaaga bulshada si aad ula wadaagto oo aad ugu dhiirrigeliso fiidiyowyada qaababkooda hooyo. Ka taxaddar in barxad kasta ay leedahay xaddidnaanta dhererka fiidiyahaaga.
Waxaan rajeynayaa in kuwani ay bixiyaan xoogaa gargaar ah sidaad ugala shaqeyso fiidiyowga guriga adoo dhibaatadan kujira!
Tags: google hangoutsxafiiska gurigaSuuqgeynta Webinarshir-jaraa'idfikirka fiidiyowgadhufto ee fiidiyowga ahistaraatiijiyada fiidiyowgatalooyinka fiidiyowgakhiyaanooyinka video